Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaanka Wabxo ee gobolka Galguduud
April 23 2014 15:31:10
Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo la wareegay degaanka Wabxo ee gobolka Galguduud
Ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM oo is garabsanaya ayaa maanta la wareegay degaanka Wabxo oo ka tirsan gobolka Galguduud halkaasi oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada Al-Shabaab, waxaana la soo sheegayaa in daqiiqado kahor ay halkaasi isaga baxeen.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM ay saakay aroortii weerar ku qaadeen degaanka Wabxo, waxaana halkaasi ka dhacay is rasaaseyn muddo daqiiqado ah socotay oo ay la galeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa markii ay xaqiijiyeen in gebi ahaanba magaalada Wabxo ay la wareegeen waxay bilaabeen howlgallo iyo baaritaano la xariira miinooyin lagu aasay goobaha muhiimka ah sida waddooyinka, xarumaha maamulka iyo goobaha ay dadku ku badan yihiin.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalyahanada Al-Shabaab ay u baxsadeen dhinaca howdka, halkaasi oo sida ay sheegayaan dad socoto ah ay ka bilaabeen inay isku abaabulaan si ay dagaal rogaal celis ah ugu qaadaan ciidamada is garabsanaya.
Dhinaca kale dadka ku dhaqan degaanka Wabxo ayaa cabsi weyn soo food saartay, iyagoo ka baqanaya in mar kale degaankooda ay ku dagaalamaan ciidamada Dowladda iyo dagaalyahanada Al-Shabaab, iyadoona qaar ka mid ah dadkii Wabxo degenaa ay isaga carareen gudaha magaalada.
Jowhar.com730,118 unique visits